Kune vakadzi mudzimba vanosvika pakuchembera vasina kumbonakirwa nekuiswa! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Kune vakadzi mudzimba vanosvika pakuchembera vasina kumbonakirwa nekuiswa!
Kana une murume anoti pese pese anokasira kutunda, zvinokwanisika here kuti azomboitawo zvine mwero zvinogutsa mukadzi wake pabonde? Kune vakadzi mudzimba umu vanokura kusvika pakuchembera vasina kumbonakirwa nekuiswa nemurume. Asi iye achitonakirwa chose achizvirova dundundu kuti ndiye shasha yekusvira mukadzi.
Baba vemwana havambogarisiwo mwana pasi vachimurondedzera kuti hapana chakaipa pakuita chimhandara maoko nokuti varume vese uye vakadzi vese vanozviita, saka kana achiita ngaatore nguva adzidze kunakirwa nazvo. Ipapa pamaitiro okuda kukasira mukomana achiri mudiki ndipo panotangira dambudziko rinozoonekwa ava nemukadzi.
Kotizve isu vana mai vemba kusanzwisisa varume vedu. Murume kana ada zvekuisana muwanire nguva muisane, unonzwa mukadzi mukuru achiudza murume wake kuti kana uchida kusvira kurumidza upedze nekuti magwana ndiri kumukira somewhere. Chinhu chisingabatsiri murume kana mukadzi, kuudza murume kuti akasire kupedza nekuti pfungwa dzako dziri pane imwe nyaya. Uri kutaridza murume kuti hauna hanya nokunakirwa saka anofanira kukasira.
Zvino kana ange ari munhu akajaira zvechimhandara maoko kubva kare, anongoona zvafanana nokusvira mukadzi nekuti mukadzi ari kutomuti akasire, sezvaaichiita nemaoko. Saka zviri kunzi isu varidzi vevarume, ngatisataridza kuti pane nguva yatinoda kuti murume akasire kupedza. Zvirikutonzi kana murume akakukasirira, usangoti zii pazviri, asizve usamunyomba. Taridza murume wako mamwe maitire angaita kukubatsira kusvika paogasm nemaoko kana muromo mboro yake yakarara nekuda kwekuti adiridzira.
Murume anokwanisa kumwa nekusveta mazamu, kukwizirira bhinzi, kupurudzira zvidya, kukisa mutsipa nenzeve nepamuromo, oramba achidaro kusvika watundawo iwe. Ratidza murume zvokuita kuti urambe une zemo. Unokwanisa kuzvikwiza bhinzi iye achikusveta paanoda kusveta sekuti mazamu.
Ngaanzwisise kuti akasira kuguta iwe usati waguta saka ngaarambe achienderera mberi. Mudzidzisezve kuti kana ari mukati mako, akanzwa akuda kutunda, ngaamire kukoira asi oramba achikukisa nokusveta mazamu, guvhu, nzeve. Kana kuda kutunda kwaderera odzokerazve pakukoira. Iwewo ziva mashandisirwo echiuno kuti usakasirisa murume.
Kana pari papi zvapo, usaudza murume kuti akasire nokuti pane chauri kuda kuita. Rega anonoke paadira kuti agare achinzwisisa kuti kunonoka ndiko kwaunotofarira.
Psychology yemurume ndeyokuda kukasira. Dzidzisa murume wako kuti kunonoka kutunda ndiko kunotonaka zvinofadza.
Thank you for reading – Comments are welcome
Tete: Ndakamuka ndikaona sister yangu achiyamwa chinhu changu, ndikatunda!
Previous articleNdakaramba ndakatarisa zvidya zvake yakabva yaita kutepuka ichimira!
Next articleH0TTEST ON INSTAGRAM! Madam Vanodhonhedza Musika